Mitohy ny fihetsiketseham-panoherana herisetra ao Belgrade, raha tafavoaka velona tamin’ny fikasana hamonoana azy ilay mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2018 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Ελληνικά, English
Fihetsiketseham-panoherana herisetra notontosaina tamin'ny 15 Desambra tao Belgrade, Serbia. Saripikan'i Vesna Radojević, nahazoana alalana.
Ity lanonana nokarakazain'ny antoko mpanohitra ity dia taratry ny fihetsiketseham-panoherana voalohany nitranga herinandro talohan'izao, nateraky ny fanafihana nahazo mpitsikera governemanta iray izay nihosin-dra tanteraka ny akanjony rehefa notafihan'ny jiolahimboton'ny pro-governemanta izy. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity, efa ho avo roa heny ireo olona nanao diabe am-pilaminana nanavatsava ny afovoan-tanàna, natosiky ny toe-javatra maro nitranga ny herinandro mialoha izany.
“Tsy hitsahatra ny manoratra momba ny mpangalatra aho, na dia mamono ahy aza ireo,” hoy i Milan Jovanović raha vao nisy ny fanafihana.
Nanomboka fitarihana fitia tsy mba hetra hanampiana ny fianakavian'i Jovanović ny orina mpanasoa Slavko Ćuruvuja, nahazo anarana ho fanomezam-boninahitra mpanao gazety iray nisy namono tamin'ny taona 1999, miainga amin'ny fampitaovana ara-pitsaboana ho azy sy ireo filàna fototra, toy ny sakafo sy fitafiana.
Hita tamin'ny valiny nataon'ny manampahefana tamin'ny fitakian'ny fihetsiketsehana tamin'ny 8 desambra ny fampielezana vaovao diso sy fandisoam-baovao izaitratra, ary ny fanambaràna nataon'ny Filoha Aleksandar Vučić nanao hoe: “Mandehana hatrany hatrany amin'izay tianao aleha, fa tsy hamaly ny fitakianareo mihitsy aho. Na dia dimy tapitrisa aminareo aza no mivory.”
Naneho fanohanana ny fihetsiketseham-panoherana ny vahoaka tamin'ny fampiasana ny teny tarigetra “Iray amin'ny dimy tapitrisa aho” (hashtag #1od5miliona) izay fanondroana mivantana ny fanamarihan'ny filoha. Manana mponina eo ho eo amin'ny enina tapitrisa eo i Serbia.